Qorshaha Cusub Ee Abiye Uu Ku Waajahayo Wada Hadaladii Hargeysa Iyo Muqdisho | Berberanews.com
Home WARARKA Qorshaha Cusub Ee Abiye Uu Ku Waajahayo Wada Hadaladii Hargeysa Iyo Muqdisho
Hargeysa(Berberanews)-Muddooyinkan dambe waxa muuqda in Raysalwasaaraha Itoobiya Abiye Axmed uu bedelay qorshe uu sannadkan isku dayay inuu ku waajaho Somaliland iyo Soomaaliya oo ka fashilmay kaas oo ahaa inuu Hargeysa keeno Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Wararka soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in Raysalwasaare Abiye Axmed uu wada hadalada u wareejiyay Raysalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ka dib markii uu Abiye qaatay fikir ah in dadka reer Somaliland xasaasiyad ka qabaan Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qorshaha cusub ee Abiye iyo Khayre u dejiyaan Somaliland, mana jiro war rasmi ah oo ay Hargeysa, Muqdisho iyo Addis Ababa ka soo saareen dhaqdhaqaaqyadan.
Wararka qaarkood ayaa sheegaya in Raysalwasaare Abiye uu dalalka Carabta qaarkood u bandhigay aragtidiisan cusub.
Kooxo salaadiin ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrimaha wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya oo aanay hore uga hadli jirin waxaanay ku baaqeen in laga qayb geliyo wada hadalada maadaama oo laga hadlayo masiirkii umadda. Xukuumadda Somaliland ayaa ku gacan saydhay salaadiintan soo jeedintooda, waxaanay ugu hanjabtay in sharciga lala tiigsan doono.
Siyaasiga Cabdillaahi Xuseen Iimaan (Darawal), oo shalay saxaafadda la hadlay ayaa ka digay arrimaha socda oo haddii aan tallo balaadhan laga yeelan Somaliland ku ridi kara god dheer.
Siyaasiyiin kale oo aan iyaguna weli saxaaadda la hadlin, balse qaba walaac siyaasadeed ayaa la filayaa inay warbaahinta la hadlaan dhawaan.
Madaxweyne Biixi waxa looga baahanyahay inuu arrimaha socda haddii ay jiraan uu cadeeyo oo uu umadda u waramo, saxaafada dunidana gaadhsiiyo mawqifka Somaliland. Sababtoo ah aamusnaanta Somaliland waxa ay caalamka qaarkii u arki karaan farriimo isku jira oo aan cadayn, shacabkana waxay ku ridi kartaa jaho-wareer. Mdaxweyne Biixi waa inuu la yimaadaa tallo bisil oo siyaasadeed oo uu umadda la wadaagay oo uu ku waajahayo dalka Soomaaliya iyo Raysalwasaaraha Itoobiya ee dardarta badan.
Waxa la joogaa xilligii uu Madaxweyne Biixi dejin lahaa siyaasad arrimo dibadeed oo firfircoon oo midho dhal ah. Wakhtigan Somaliland kuma socon karto siyaasad arrimo dibadeed oo hadba wixii soo kordha ka falcelisa. Waa in la helaa siyaasad khaaraji oo si deg deg ah u akhriyi karta isbedelada gobalka iyo caalamka ku soo kordha ee khuseeya Somaliland.
Madaxweynaha waxa looga baahanyahay inuu sameeyo guddi cusub oo miisaan iyo garbo culus oo uu isna mus dambeed u noqdo oo ku waajahan wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaate waxa muuqata in wada hadalada Hargeysa iyo Muqdisho ay sannadkan gelayaan marxalad cusub oo u baahan hoggaamin firfircoon oo dejisa qorsheyaal lagu waajaho, lagagana hortago wax kasta oo soo kordha oo khatar ku noqon kara Somaliland.
Previous articleBerbera: Gudida Ka Hortaga Coronvirus oo La Wareegay Qalab Caafimaad
Next articleSomali: Wasiir u geeriyooday corona Virus